I-World Tourism Network iyalumkisa: Musa ukutshabalalisa i-Luxury Travel Market!
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeManyano » I-World Tourism Network iyalumkisa: Musa ukutshabalalisa i-Luxury Travel Market!
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Xanduva • Tourism • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • I-WTN
Ikamva lohambo lwasemva lwe-COVID lubonakalisiwe
Ukhenketho lusekwe ekudaleni iinkumbulo kunye neenkumbulo zivela kumava awodwa nanomtsalane. Ukuba ukuhamba kweklasi yokuqala kuncitshiswe kwinqanaba lenkonzo yokuhamba kwezoqoqosho kwiminyaka embalwa edlulileyo kodwa ngexabiso eliphezulu, ngoko abaqeqeshi bezohambo akufanele bamangaliswe xa ishishini ekugqibeleni liyeka.
Ukusukela oko ubhubhani we-Covid waphelisa ishishini lokhenketho, iinkokeli zalo bezifuna iindlela zokubuyisa ilahleko yezemali.
Abanye kwishishini banyuse amaxabiso, abanye baye bathoba iimpahla kunye neenkonzo, bahlala begxeka ukunyuka kwamaxabiso, ukusilela kwikhonkco lokubonelela, ukunqongophala kwabasebenzi abanezakhono, okanye ubhubhani we-Covid.
IWorld Tourism Network iyaqonda ukuba ezi ngxaki zidweliswe ngasentla ziingxaki zokwenene.
UGqr Peter Tarlow, umongameli weWorld Tourism Network, kwaye oyingcali kwezohambo lwehlabathi kunye nokhuseleko lokhenketho kunye nokhuseleko uyachaza:
Ezi ngxaki, nangona kunjalo, zezeshishini kwaye akuloncedo kwishishini elifuna ukubuyela umva ukusuka kumda wentlekele ukuze liqeshe rhoqo ngaphantsi kwezizathu zokwenyani ekuhlawuleni uhambo olutofotofo kodwa lihlala linikezela ngaphantsi kakhulu kunomntu. lindela.
The Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi, emele amazwe okhenketho namashishini kumazwe ali-128, ikhuthaza amalungu ayo ukuba asebenze ekwakhiweni ngokutsha kokhenketho ngendlela yokuba abathengi balo bangaphambili bangayi kuphelela nje ekucingeni “ngeemini ezimnandi zakudala” zokuhamba kodwa bajonge phambili kwikamva apho ulonwabo nobuyokoyoko bohambo. jika izinto zesiqhelo zibe yinto ekhumbulekayo.
Kwixesha lokwakha kwakhona ishishini lokhenketho kunye nokhenketho alinako ukubona ukuhla kumgangatho wemveliso yalo okanye kwinkonzo eliyinikezelayo. Oko kwehla komgangatho weemveliso kunye neenkonzo ezinikezelwayo ziya kuthi ekuhambeni kwexesha zichaphazele ishishini lezokhenketho, kwaye ekuhambeni kwexesha, iinkokeli zalo ziya kuphulukana nemali.
Ukuba ishishini lokhenketho kunye nokhenketho liza kuphumelela kula maxesha anzima, kufuneka lenze okungakumbi kunokuzibona nje lixhoba kwaye alinakujika abathengi balo abahlawulayo babe ngamaxhoba enkonzo ephantsi kunye nomgangatho ophantsi wemveliso.
Xa uhambo luba yingxaki, xa ubumnandi bokuhamba buba ngumsebenzi wokuhamba ke akukho nani lamaqhinga obudlelwane boluntu okanye ukuthengisa kuya kukwazi ukugubungela ukuphoxeka koluntu. Endaweni yoko, njengoko izithembiso zingafezeki ushishino lwezokhenketho luya kujongana nengxaki yokuthembeka.
Uluntu oluhambahambayo alukho i-naïve okanye olungenalwazi kwaye njengoko umgangatho wenkonzo kunye nemveliso iyancipha okanye iyancipha, abahambi baya kufumana iindawo ezintsha ezizimisele ukubonelela umgangatho ophezulu weenkonzo kunye neemveliso ngexabiso eliphantsi.
Ngesi sizathu, uthungelwano lwezoKhenketho lweHlabathi lukhuthaza ishishini ukuba:
Iindawo zokulala kufuneka zinike inkonzo ehambelana nexabiso elitshintshileyo. Ihotele yodidi ayinakwazisa ukuba iyakucoca igumbi kube kanye ngeentsuku ezintathu. Ukuba ubiza ixabiso elitofotofo ngoko unikezele ngenkonzo yodidi. Ukuba akunciphisi ixabiso!
Buyisa kwaye wenze izinto ezintsha. Ukubonelela ngephephandaba lasimahla, okanye itshokholethi ekhethekileyo yobusuku obulungileyo kuguqula umhambi ngeenyawo kwindawo ekhethekileyo kwaye ekhumbulekayo.
Okuyinyani kwishishini lokulala kukwayinyani nakwishishini leenqwelomoya. Ukuba iinqwelomoya, nakwinqanaba lokuqala okanye leshishini, azibi nto ngaphezu kweebhasi-esibhakabhakeni ke ekugqibeleni umhambi uya kufumana ezinye iindlela. Kwihlabathi lanamhlanje ishishini lidla ngokuqhutywa phantse ngaphandle kobunzima namaxabiso aphantsi.
Iinkampani zeenqwelomoya kufuneka ziphelise ubume bazo bentlawulo ye-la carte., Kufuneka zibonise uluntu ukuba azikhathali kuphela xa zifuna ibheyile karhulumente kodwa nangamaxesha amnandi.
Ukhenketho kunye namashishini ohambo kufuneka aphuhlise iiyure ezisebenziseka lula kubahambi. Ukungena kwihotele nge-4pm kwaye ukhangele ngo-11: 00 isidenge xa ​​iihotele zingahlali ngokupheleleyo. Imigaqo-nkqubo elolo hlobo ekugqibeleni ixabisa kakhulu kunentengiso ebiza imali eninzi eyenza izithembiso ezithi ekugqibeleni zithande ukulahlekisa.
Ukuphakamisa umgangatho weemveliso ezinikezelweyo kwaye wenze ezi mveliso zibonise intlawulo yexabiso. Ukuba ihotele okanye indawo yokutyela ibiza umrhumo wepremiyamu ngoko umgangatho wokutya okunikezelwayo kufuneka ubonise loo ntlawulo. Iihotele ezininzi zokutyela zinciphisa iikona kodwa zibiza amaxabiso eprimiyamu. Undoqo kukuba njengoko uluntu lusiya luqonda ngakumbi umsantsa phakathi kweendleko kunye nokuthengiswa komgangatho kunye nodumo lunokuqala ukwehla.
Musa ukuthembisa into ongakwaziyo ukuyifeza. Kwinxalenye yokugqibela yenkulungwane edlulileyo ishishini lokhenketho kunye nokhenketho lalwela ukubuyisela ukuthembeka kwalo. Emva koko i-9-11 yenza uluntu ukuba lube novelwano kwiimfuno zeshishini. Ekupheleni kweshumi leminyaka yokuqala yenkulungwane yamashumi amabini ananye ishishini lezohambo nokhenketho liluchithile olo velwano. Ukuhamba kunye nokhenketho kuphinde kwaphinda kwafumana umdla omkhulu kunye nokuqonda ngexesha leminyaka yeCovid. Ngoku lixesha lokuguqula loo ntando ilungileyo ibe yizenzo kwaye ubonise uluntu ukuba ishishini lokhenketho kunye nokhenketho libaxabisa kangakanani na abathengi kunye nabathengi balo ngokudala iimveliso ezintsha nezintsha ngamaxabiso abonisa ubunyani.
Eyona ndlela yokuthengisa yimveliso elungileyo kunye nenkonzo elungileyo eboniswe kwindawo emnandi nekhuselekileyo & ekhuselekileyo. Ukuba uhambo kunye nokhenketho lulandela ezinye zezi ngcebiso zisisiseko ke imboni enkulu yehlabathi iya kuba nkulu kwakhona.
Ulwazi oluthe vetshe kwiWorld Tourism Network kunye nobulungu baya ku-www.wtn.travel